Si komadhe yaa gaaddiduu koo! | Oromia Shall be Free
bilisummaa January 27, 2014	Comments Off on Si komadhe yaa gaaddiduu koo!
Saalfii fi komii hin beektuu
Akka namaa of dandeessee hin deemtuu
Maaliif na akkeessitaa yaa gaaddidduu?
Yoon deemu nawajjin deemta
Jooraa ooltee nawajjin galta
Ofirraa sidhiibus, diddee natti maramta
Anoo si komadhe, yaa gaaddidduu
Ana golgaa godhattee, sodaattee qara aduu
Bifti kee gurraattii, silaa lubbuu hin qabduu.
Akka waan of dandeessee, najalaa milqxee
Achi narraa baatee akka waan namaan qixxee
Gootummaan kee edaa, yeroo dukkana lixxee?
Ati maaf sodaattaa fuundura aduu dhaabbachuu?
Yeroo hunda namatti dahattee ifaa baqachuu
edaa ni sodaatta dharaa fi dhugaa fuundura dubbachuu?
Isuma dhugaan sikomadhe yaa gaaddidduu
Otoon hin bariin akka taate, lubbu dhabduu
Kan gaaddidduu fakkaatan, jiraachaa jireenya namaa
Yoo ilaalan hin qaban hirdhina qaamaa
Itti beeku jiraachuu, jireenya mooraa lamaa.
Baratanii jiru dubbii fi jireenya fakkeessaa
Goota biratti goota dhaadhessaa
Walaaloo garuu, beekaa fi hayyuu of fakkeessaa
Itti beeku jiraachuu, jireenya qaanessaa.
Bakka itti waamamanitti hin argaman bakka gootaa
Jireenya isaanii jiraachaa, nama hojatu goomataa
Dhugaa dabsanii, jiraatu nama amataa.
Maafan sikomadha gaadiidduu koo
Rabbitu sitoche akka jiraattu dhahoo koo
Hin jirree uumanii dhara dhugaa fakkeessuu
Asumee tahanii of xiqqeessuu
Bakka hojii hin jiranii, akka gootaa of dhaadhessu.
Anoo dhiise ,Sikomadhu gaaddiddu
Lubbu qabeeyyiin otoo jiranuu anoo sitti hin gaddu
Ardhas boru fakkeessituun, lafarraa haa baddu.
Ufata uffatanii nama fakkaachaa
Bobaa diinaa jala taa’anii, alagaa abdachaa
Mana alagaa golgatanii, kan lammii lagachaa
Isaan kana gaaddidduun, kan ta’an lammiitti bitaacha.
Walaaloodha, garuu beekaa of fakkeessu
Hojachuu irra oduu odeessu
Dhageeffachuu irra of dhaadhessu
Of irratti amantaa hin qaban lammii irraa of moggeessu.
Maarree lammii firaa
namni akkanaa nuwajjin jiraa
lammii dhiisee ormaaf garaa hiraa
kanaaf warra nubira jiraachaa garaan nurraa fagoo
lammii facasanii guutachuuf fedhii aangoo
waanta irratti hin beekamne se’anii
sicoo sabaa fi walaaloo ta’uu isaanii
itti imuu qabu lammiin tokko ta’anii.
Kanaaf gaadiduu koo sikomachuu dhiise
Kan komatamu jira nam fakkaatuun ilbiisee
Tags Caalaa hundee walaloo
Previous Wallistuu Almaaz Tafarraa: Numaan fiiga malee halknii fii guyyaa 090113
Next The Filthy Pond of Corruption That TPLF And Its Authorities Baptized In.